मैले कविता लेख्न सकिन
दीपक जडित, (एँकरेज, अलास्का)
अनुशासनहीनताको गतिलो उदाहरण बाँचेको छु म ।
हाम्रो आफ्नै पनि एउटा उखान छ, 'कुकुरको कामपनि छैन, फुर्सदपनि छैन ।'
'थुक्क! म, आफ्नै निमित्त कुकुरको दृष्टान्त दिनुपर्ने?' त्यो पनि भुक्न नसकेर । कथंकाल भुकिहालेपनि भुकेको अर्थ नलागेर । हो, भुक्न अर्थात बोल्न अर्थात लेख्न नसकेर नै, अझ लेखे/बोलेपनि त्यसको अर्थले आफैंसंग महत्व नराखेर कुकुरको दृष्टान्त राख्नुपरेको हो ।
त्यसो त उदाहरणमा कुकुरलाई पेश गरेर मान्छेलाई खसाईयो भनेर मान्छेवादीहरुलाई झनक्कै रीस उठ्दो हो । तर मलाई त हामी मान्छे नै पनि के पो हौं र भन्ने लाग्छ । होइन भने अहिलेसम्म हामी मान्छेले आफैंले आफुलाई बाहेक अरु कस्ले हामीलाई मान्छे, मानिस, मनुष्य भनेको छ र? त्यहि कुकुरलेपनि हामीलाई मान्छे कहाँ भन्दो हो र? कुकुरले मान्छेलाई के भन्छ हामीलाई के थाहा ?
मैले वासुदाइ सम्झें । वासुदाइको भ्वाईस म्यासेज सम्झेँ । भोलीपल्ट हुन गैरहेको मनासस कोठे कविता गोष्ठि सम्झें । त्याँहा उपस्थित भएर तथा फोन मार्फत कविता वाचन गर्नुहुने नदेखे/नभेटेपनि रचना मार्फत जाने/चिनेको अग्रज सबै कवि साहित्यकारहरुलाई सम्झें । अनि तत्काल मैले झेलिरहेको अवस्था सम्झें ।